Faaidooyinka Caafimaad Ee Laga Helo Hawada Badda - Daryeel Magazine
Faaidooyinka Caafimaad Ee Laga Helo Hawada Badda
Marka laga hadlayo cuntooyinka nafaqada leh, badda waxa laga helaa oo laga soo saaraa waxyaabo kala duwan oo bani’aadamka ka caawiya dhinaca caafimaadka, sidoo kale biyaha badda ayaa caafimaad jidh ahaaneed iyo mid nafsiyan ahba laga helaa.
Daraasad la sameeya ayaa sheegaysa in dhawaaqa mawjadaha biyaha badda ee u dhaca qaababka kala duwani ay dejiyaan maskaxda aadamaha, waxaanay siiyaan mawjadahaasi dareen deganaansho ah oo nafsiyan ah.
Deganaanshaha maskaxdu ka hesho mawjadaha badda waxay kaa caawinaysaa inaanay maskaxdu dareemin isku buuq (stress).
Helitaan hawo fiican oo saamaxda hurdo hurdo caafimaad
Ma is-weydiisay weli muxuu qofku u seexdaa hurdo badan, marka uu in badan kusoo qaato xeeliga badda iyo meelaha lagu dabbaasho ee badda, sababtu waxa weeye hawadda fiican ee kasoo imanaysa ama uu qofku ka helayo ee kasoo dhacaysa badda.
Cadceedsiga xeeliga badda oo u wanaagsan dubka jidhka.
Marka uu qofku ku nasto xeeliga badda iyadoo cadceedu ay dushiisa taagan tahay, kulaylkaas waxa uu saameeyaa hab-dhiska wareegga dhiiga iyo shaqada uur ku jirta iyo maskaxda, qaybo ka mid ah jidhka ayaa u baahan inay isku helaan cadceedda iyo hawada nadiifta ah ee kasoo dhacda badda, taasoo inta badan culimada caafimaadku ay sheegaan inay tahay maskaxda oo ka hesha deganaan iy xasilooni. Sidoo kale kulaylkaas cadceeda ee xeeliga baddu waxa uu u fiican yahay dubka jidhka, taasoo ka ilaalisa xanuuno ku dhaca maqaarka jidhka.
Faaidooyinka Caafimaad Ee Yaanyada Wax Ka Baro Faaidooyinka Caafimaad Ee Ku Duugan Lowska Nafaqada Iyo Caafimaadka Laga Helo Cabista Caanaha Geela Faaidooyinka Faytamiin D-ga Iyo Khatarta Ka Dhalan Karta Hadii Uu Jidhku Waayo